Fanadinam-panjakana 2016 : manomboka ny fisoratana anarana | NewsMada
Fanadinam-panjakana 2016 : manomboka ny fisoratana anarana
Nisokatra ny alatsinainy teo ny fisoratana anarana ho an’ny fanadinam-panjakana voalohany CEPE ary hikatona ny 18 marsa amin’ny 4 ora hariva. Ho an’ny BEPC, hosantarina ny 22 febroary ny fandraisana ny antontan-taratasy ho an’ny mpiadina ary hikatona ny 22 avrily amin’ny 4 ora hariva. Ho an’ny fanadinana momba ny mpampianatra kosa, hanomboka ny 28 marsa ny fisoratana anarana amin’ny CAE ary hifarana ny 27 mey. Ho an’ny CAP kosa, 28 marsa koa ny fisantarana ary hifarana ny 5 mey ny fandraisana ny fisoratana anarana.
Anisan’ny nahabe resaka ny maro ny fidinan’ny taham-pahafahana fanadinam-panjakana farany teo, antony nambara nitarika izany ny fahamaroan’ny mpiadina tsy atolotry ny sekoly. Handray fepetra ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena manomboka amin’ity taona ity indrindra ho an’ny ankizy kely taona loatra manala fanadinana. Hisy fivoriana miaraka amin’ny sampana 10 misahana ny sekoly tsy miankina ny minisitera foibe handinihina ny fanapahan-kevitra horaisina manoloana io tranga io.
Matetika ny mpianatra amin’ny sekoly tsy miankina no ahitana ny ankizy kely taona loatra manandrana manala fanadinam-panjakana.
Nisondrotra ny saran’ny fisoratana anarana ho an’ny bakalorea
Ho an’ny bakalorea kosa, niakatra ny saran’ny fisoratana anarana satria nitombo ho 15 000 Ar ho an’ny mpiadina atolotry ny sekoly, 50 000 Ar ho an’ny manolo-tena. Mahatratra 100 000 Ar kosa ho an’ny mpiadina vahiny. Teo aloha 12 000 Ar ho an’ny sokajy voalohany, 30 000 Ar ho an’ny mpiadina tsy atolotry ny sekoly ary 90 000 Ar ho an’ny mpiadina teratany vahiny. Hosantarina amin’ny alatsinainy 11 janoary ny fisoratana anarana ary hikatona ny 4 marsa ho avy izao.
CEPE : talata 5 jolay, BEPC : alatsinany 18 jolay- 21 jolay, CAE : talata 30 sy alarobia 31 aogositra. Ho an’ny CAP : talata 20 sy alarobia 21 septambra.